Ezona zixhobo zibalulekileyo zokufunda isiLatin, kwizichazi magama ukuya kwizifundo Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Imbali yoncwadi, Iincwadi, Iincwadi, Izaziso, Ezahlukeneyo
Udonga olunemizobo yesiLatin.
IsiLatin lulwimi olunomdla kakhulu, Ezinokuchaza izinto ezinokuthi iilwimi zanamhlanje zingabinako ukuzenza ngokobuhle. Olu lwimi, kule mihla, lusetyenziswa kwezonyango, kwezenzululwazi nakwezomthetho, ubukhulu becala, ukuze ukwazi ukuyiphatha ngokulula okanye ngokulula kunokuthetha uncedo. Oku ngaphandle kokubala ukonwaba oko kuya kuthetha ukuba ufunde iiklasikhi ngolunye lweelwimi zabo zantlandlolo.
Into yokuqala ekufuneka unayo xa uqala ukufunda olu lwimi sisichazi-magama. Inyathelo elilandelayo kukuthatha iikhosi okanye ukusebenzisa abaguquleli kunye nezifundo ezikwi-intanethi, ukuze ukufunda kugqitywe kangangoko kunokwenzeka.
1 Esona sichazi-magama sesiLatin
1.1 AmaLwimi esichazi-magama esiLatin SM
1.2 Ingcambu yesichazi magama
1.3 Isichazi-magama sesiLatin sedijithali sabaFundi
1.4 Imifanekiso eqingqiweyo yesiLatin. IsiLatin-iSpanish / iSpanish-Latin (Vox -Iilwimi eziDala)
1.5 Isichazi-magama esitsha se-Latin-Spanish etymological kunye namazwi avela: Uhlobo lwesihlanu (Iileta)
1.6 IsiLatini. Isichazi-magama se-didactic
2 Abaguquleli abakwi-Intanethi
3 Izifundo zesiLatin
4 Iikhosi ezikwi-Intanethi zeLatin
5 IsiLatin: ngokwengcinga ifile, kodwa iphila kakhulu ekusebenzeni
Esona sichazi-magama sesiLatin
Xa ukhetha isichazi-magama zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, ukusuka kubungakanani kunye nobunzima ukuya kwixabiso. Kwaye kukho iintlobo ezininzi zezichazi-magama, ezinye zizisa imithambo kwaye ezinye zide nee-audios zokunceda ekubizeni amagama.
Kolu luhlu, kuchazwe izichazi-magama ezi-3 kwaye zichaziwe, ezibini ngokwasemzimbeni kunye nedijithali enye, enezona mfuno zisezantsi zokuguqulela isiLatin:
AmaLwimi esichazi-magama esiLatin SM
Esi sichazi-magama sisebenza ukuguqulela ukusuka kwiSpanish ukuya kwisiLatin, kodwa hayi ngenye indlela ejikeleze. Nangona kunjalo, ilungile kubafundi.
Uyayifuna? Thenga apha.
Ingcambu yesichazi magama
Ukugqwesa ekuguquleleni ngobuchule okanye kwabafundi. Ixabiso lalo liphezulu ngokuthelekiswa nabanye, nangona kunjalo, izinto ezibonelelwa ngumsebenzisi zithethelela imali oyityalileyo. Ukuba ungumntu obonakala ngokufuna ukugqwesa, fumana esi sichazi-magama.
Isichazi-magama sesiLatin sedijithali sabaFundi
Esi sichazi-magama sinobuchwephesha bokuba yidijithali, Kanye njengoko igama layo lisitsho. Inokufundwa phantse kuso nasiphi na isixhobo se-elektroniki, esenza ukuba kube lula kakhulu. Ngelishwa ayifumaneki ngeSpanish, iza kuphela ngesiNgesi.
Imifanekiso eqingqiweyo yesiLatin. IsiLatin-iSpanish / iSpanish-Latin (Vox -Iilwimi eziDala)
Isichazi-magama esilula kakhulu ukusebenzisa, kunokuthiwa sinomdla. Unokongeza umdla wegrama yesiLatin. Olu ncediso, ukuba lusetyenziswe kakuhle, lunokuba luncedo kakhulu. Lutyalo-mali olukhulu kwifomati yalo yomzimba ngenxa yokuchasana nezinto ezenziwe ngazo.
Isichazi-magama esitsha se-Latin-Spanish etymological kunye namazwi avela: Uhlobo lwesihlanu (Iileta)
Esi sichazi-magama sibaluleke kakhulu kuba Ivumela umsebenzisi ukuba azi malunga nendlela isiLatin esichaphazele ngayo isiBasque, isiNgesi nesiJamani. Obu buchule be-didactic buququzelela umfundi ukuba aqonde ukuba yintoni na echaphazela ubudlelwane phakathi kwesiLatin nesiGrike, kunye nesiphumo saso kwiisayensi ezahlukeneyo.
IsiLatini. Isichazi-magama se-didactic
Esi sichazi-magama, esilungiswe nguJavier Aramburu, sibonelela ngenkqubo yokufundisa yesiLatin epheleleyo. Umbhali usebenzise imizekeliso kunye neenkcazo ezineenkcukacha kakhulu kwigama ngalinye, ukuze kungabikho nto isindayo, kwaye ke olo lwimi lunokuqondwa ngeyona ndlela ibalaseleyo. Xa uyifumene, uyakonwabela amaphepha angama-64 apho unokuqonda khona okunxulumene nenkcubeko yesiLatin, kunye namanye angama-32 ukwazi, ngendlela echanekileyo, malunga negrama yolwimi oluhle kangaka.
Fumana ikopi apha.
Isichazi magama sesiLatin.
Kwimeko apho isichazi-magama singenakwenzeka, abaguquleli kwi-Intanethi lukhetho olukhululekileyo, olukhululekileyo. Ukusetyenziswa kobutyebi kulungele abo bafuna ukwenza iinguqulelo ezimbalwa kwaye banethuba lokuba inokusetyenziswa ukusuka kwiSpanish ukuya kwisiLatin okanye ngokuchaseneyo, ukongeza kwiilwimi ezahlukeneyo.
Itoliki kaGoogle ineLatin phakathi kweelwimi zayo ukuguqula. Kuba yeyona ilula kwaye ikhawulezayo ukufikelela kuyo, ngomnye wabaguquleli abasetyenziswa kakhulu. Into ekufuneka igcinwe engqondweni kule meko kukuba iinguqulelo zayo azichanekanga ngokwentetho, ke isebenza kuphela ngamagama ambalwa adibeneyo okanye izivakalisi ezifutshane kakhulu.
Kukho okungapheliyo kwabaguquli be-Intanethi, uninzi lwazo lusimahla kwaye lulula kakhulu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba aba baguquleli balinganiselwe kwaye kufuneka basetyenziselwe inkxaso kuphela.
Kwimeko yokufuna okanye yokufuna ukufunda indlela echanekileyo yokubiza amagama, i-online tutorials lolona khetho lufanelekileyo. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba ezi tutorials zisimahla, ukuze babe nolwazi lwekhonkrithi, kodwa akunakulindeleka ukuba basebenze xa ufuna ukufunda isiLatin ngendlela enzulu.
I-YouTube yindlela entle yokufumana izifundo phantse nasiphi na isifundo, kubandakanya isiLatin. Kule nethiwekhi kukho iintlobo ngeentlobo zeevidiyo ezineekhosi ezigqibeleleyo zabaqalayo, eziphakathi okanye ezinqanaba eliphambili kwisiLatin. Kwakhona, oku akuthethi ukuba yeyona ndlela ifanelekileyo yokufunda ulwimi olufileyo, kodwa ngokuqinisekileyo iyaxhasa kakhulu.
Iikhosi ezikwi-Intanethi zeLatin
I-Latin calligraphy.Ezi zifundo zihlala zineendleko, nangona kunjalo, zikho ezinye ezilungileyo kakhulu kwaye, eyona ilungileyo, simahla. Kolu hlobo lwekhosi isifundo sihlala sinzulu kancinci, ke isifundo sihlala sigqibezele ngakumbi.
Linguim.com Liphepha elinekhosi yesiLatin, ebhalwe ngokucacileyo, epheleleyo. Ikhosi yayo ijolise kwabasaqalayo, inemithambo, iinkcazo ezicacileyo kwaye bathetha lukhulu ngembali kunye nokuvela kolwimi. Ikwanemithandazo eqhelekileyo kunye nemibongo.
Enye ikhosi ebalaseleyo kwi-Intanethi yokufunda isiLatini yile nkclineline.es. Ijolise ngohlobo lwebhlog, eli phepha lineeklasi zevidiyo apho isihloko ngasinye sichazwa khona. Kufana nokuthatha iklasi. Iinkcazo zigqityiwe kwaye iklasi entsha isetwa veki nganye, ke zihlala zihlaziywa.
I-Spanish Pedro León yenze ibhlog yokufundisa isiLatin ngokusebenzisa imithambo kunye neenkcazo ezicacileyo. Ibhlog yakho, Funda isiLatin kwi-intanethi, inoluhlu lwezihloko zekhosi yakho, ukusukela apho unokufikelela kwiklasi nganye kwaye wenze imithambo enikezwe ngumdali, enokukhutshelwa ngaphandle kwengxaki.
Nokuba kukonwabisa okanye umsebenzi, Ukwazi olu lwimi lufileyo kuya kuhlala kuyinzuzo. Ukufunda olu lwimi kukhokelela kuphononongo loncwadi lwayo, amaqhawe alo kunye nabangendawo, imbali yayo.
Ukufunda ngesiLatin yenye indlela yokufunda imbali yehlabathi kunye noluntu. IsiLatin sasikho ngaphambili kweRoma yamandulo, kodwa ngenxa yaso yaba lulwimi olunamandla.
IsiLatin: ngokwengcinga ifile, kodwa iphila kakhulu ekusebenzeni
Sele ngaphezulu kokungqinwa oko IsiLatin siya kuba phakathi kwethuukusuka imisebenzi kaMarco Tulio Cicero omkhulu, nkqu nolwimi lwesiRoma olusuka kulo. Olu lwimi, umama notata weSpanish, isiRomania, isiTaliyane, isiFrentshi, isiPhuthukezi kunye nezinye iilwimi ezininzi, lusasebenza ngakumbi kunangaphambili.
Ithiyori, kuba akukho mntu uza kuzalwa kwaye amkhulise njengolwimi lwenkobe, emthatha njengofileyo, ewe, kwaye iyavakala, nangona kunjalo, ubukho bakhe abunakoyiswa. Ukufundela umthetho okanye amayeza, ngaphandle kokusebenzisa amagama abo, akunakwenzeka.
Inxalenye yomlingo wesiLatin, nangona ivakala ingaqhelekanga, ilele ekufeni kwayo, kuba ayifunyanwa ngokuba yinxalenye yenkcubeko ethile, kodwa ngenxa yokuba ukhetha ukuyifunda. Lowo uvusa umdla unika amandla ngakumbi; Kwaye kukuthetha kukuya kumaxesha empucuko yakudala, kwaye uyifunde, emva koko, umnyango ovulekileyo wokungena kolwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Esona sichazi-magama sesiLatin, kunye nezinye izixhobo zokufunda olu lwimi